प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष मान्न केपी ओली तयार ! — Imandarmedia.com
प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष मान्न केपी ओली तयार !
एमाले नेता एवं सांसद पार्वत गुरुङले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच छिट्टै पार्टी एकता हुने बताएका छन् ।
उनले एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुने सहमति भइसकेको खुलासा गरे । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष बन्ने पक्का भइसकेको उनको भनाइ थियो । ‘प्रधानमन्त्रीको बन्छ भन्नेबारे अब कुनै अलमल छैन । केपी ओलीजी नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, पुष्पकमलदाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष बन्नुहुन्छ ।’ उनले प्रचण्ड एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बन्दा कुनै आपत्ति हुन नहुने बताए ।
नेता गुरुङले वाम गठबन्धनलाई जनताले स्थिरता र विकासका लागि मत दिएको भन्दै सोहीअनुसार अब बन्ने सरकारले काम गर्ने समेत विश्वास दिलाए । उनले भने,‘सबैलाई सहमतिमा लिएर सरकार अघि बढ्छ, कांग्रेसले अब पाँचवर्ष कम्युनिष्टको सरकार हेरेर बस्छ ।’